ရိုဟင်ဂျာ တစ်ရာကျော် ထိုင်းမှာ ဖမ်းမိ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကလို့ယူဆရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၁ ရာကျော်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Songkhla ခရိုင်မှာ မနေ့က ဖမ်းမိလိုက်တယ်လို့ ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။
သူတို့ကို လူမှောင်ခိုသမားတွေကခေါ်လာပြီး၊ တောထဲမှာထားပစ်ခဲ့တာလို့ ရဲကပြောပါတယ်။
အခုလိုဒေသတွင်းဖြစ်နေတဲ့ လူမှောင်ခိုပြဿနာအတွက် ဒီလကုန်လောက်မှာ ထိုင်း၊ မလေးရှားနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သုံးပွင့် ဆိုင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ ထိုင်းစစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ချန်အိုချာက ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာပဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက နာမည်ကျော်လူမှောင်ခိုသမား ၃ ယောက်ကို အသေဖမ်းဆီးမိလိုက်တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲတပ်ဖွဲ့က မနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နီးတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဆက်ဘဇားပြည်နယ် တက်ခ်နက်ဖ်မြို့မှာ အဲ့ဒီ လူမှောင်ခိုဂိုဏ်းကို သတင်းအရ ရဲကဝင်ရောက်စီးနင်းရှာဖွေရာမှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားနေတဲ့ အဲ့ဒီလူမှောင်ခိုသမား ၃ ယောက်ကို အသေဖမ်းမိလိုက်တာ လို့ ပြောပါတယ်။
သူတို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကို ပင်လယ်ဖြတ်သယ်ဆောင်ပြီး ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားကို ပို့နေတဲ့လူတွေလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ သံသယဖြစ်ထားတာပါ။
သစ်သားကိုယ်ထည်နဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ မော်တော်တွေကို ငါးဖမ်းသင်္ဘောအသွင်ဆောင်ပြီး တစ်စီးမှာ လူ ၅ဝ လောက်ခေါ်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ခအတွက် တစ်ယောက်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ဝ ကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတာကာငွေ ၂ သောင်းလောက် ယူလေ့ရှိတယ်လို့လည်း ရဲအရာရှိကပြောပါတယ်။
ဘင်္ဂလား​ဒေ့ရ်ှက လူ​တွေကိုလည်း မြန်မာ ကလို့ ​ဟြေတာ သိပ်​သဘာဝမကျဘူးထင်​တယ်​​
May 09, 2015 11:35 AM
Why could you confirm they are from Burma? Stop use Burma. Do You think and trust that any Muslims found in abroad are from Burma? Too much unfair.May be you are accusing all 200 millions of Bangalis who will be from Burma if they arrive anywhere illegally.
May 08, 2015 10:49 PM